Acer Swift 5 iyo Swift 3: Buugaagta cusub ee miisaanka culus ee summaddu leedahay | War gadget
Acer wuxuu sii wadaa inuu nooga tago wararka ku saabsan soo bandhigiddeeda IFA 2019. Shirkaddu waxay hadda soo bandhigaysaa moodooyinka cusub ee ku jira noocyadeeda kala duwan ee Swift ultraportables. Noocyadan noocyada ah waxaa lagu yaqaan buugaagta khafiifka ah iyo kuwa fudud, kuwaas oo sidoo kale ilaaliya waxqabadka wanaagsan. Waxaa loo caleemo saaray mid ka mid ah kuwa ugu caansan shirkadda illaa iyo hadda.
Qeybtaan cusub ee la cusbooneysiiyay shirkadda ilaaliyaa sifooyinka caadiga ah ee isku mid ah. Waxaan helnaa nashqad xarrago leh oo la safeeyey, miisaan fudud, laakiin leh nolol batteri oo aad u fiican. Marka waa hubaal inay u noqonayaan guul cusub Acer, tan iyo inta udhaxeysa ayaa nooga tagay moodello waawayn.
Waqtigan waxay nooga tagayaan laba laptops inta u dhexeysa intaas, sida horay loo xaqiijiyay. Shirkaddu waxay ku soo bandhigtay Swift 5 iyo Swift 3 dhacdadan IFA 2019. Labaduba waxay leeyihiin qeexitaano kala duwan, sidaa darteed waxaan ka hadli doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah shaqsi ahaan kiiskan.
1 Acer Swift 5: laptop-ka ugu fudud 14-inji
2 Acer Swift 3: Awood leh oo muuqaal leh
Acer Swift 5: laptop-ka ugu fudud 14-inji
Nooca ugu horeeya ee noocani waa Acer Swift 5. Laptop-kan ayaa lagu yaqaan inuu yahay kan ugu fudud fasalkiisa tan iyo markii la aasaasay, waana wax mar labaad la dayactirayo, maxaa yeelay jiilkan cusub culeyskiisu waa 990 garaam oo keliya. Iyadoo la ilaalinayo dhumuc aad u dhuuban, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in meel walba nala aado. Moodel wanaagsan oo arrintan la xiriira isticmaalayaasha.
Laptop-kan ayaa leh 14-inch Full HD IPSiii taabashada. Gudaha gudihiisa waxay la imaaneysaa jiilka 7-aad ee Intel Core i1065-7G2501 processor-ka wuxuuna ikhtiyaar u leeyahay inuu adeegsado sawirada madaxa banaan ee NVIDIA GeForce MX512. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay taageero ugu badnaan 3 GB oo ah kaydinta PCIe Gen 4 × 3.1 SSD. Buug-yaraha wuxuu sidoo kale la socdaa xiraha USB3 Nooca C-buuxa ah, kaas oo taageera Thunderbolt 6, Intel Wi-Fi 802.11 dual-band (XNUMXax), iyo Windows Hello adoo adeegsanaya farta akhriska.
Tani Acer Swift 5 waa ikhtiyaar ku habboon kuwa safarka badan. Maaddaama ay fududahay, laakiin waxay na siineysaa is-maamul-wanaagga wanaagsan illaa 12,5 saacadood. Dheeraad ah, laptop-ka ayaa ikhtiyaar u leh inuu isticmaalo kuleylinta degdegga ah, taas oo u oggolaaneysa in qiyaastii 30 daqiiqo oo lacag ah aan helno bateri ku filan oo ku shaqeeya saacadaha 4,5. Waxay ka dhigaysaa mid ku habboon kuwa safarka badan.
ACer Swift 3: Awood leh oo muuqaal leh
Qaabka labaad ee noocani waa Acer Swift 3, oo u taagan inuu noqdo moodal quruxsan oo fudud. Waxay leedahay a 3-inch Full HD IPS14 bandhig. Waa nooc kale oo miisaan fudud, oo culeyskiisu yahay 1.19kg oo kaliya 15,95mm qaro weyn. Markaa waa nooc kale oo ku habboon in nala qaado markasta oo safar la yahay oo la awoodo in meel kasta laga shaqeeyo.
Laptop-kan wuxuu adeegsadaa processor Intel Core i7-1065G7 Jiilka 250aad oo leh astaamaha Intel Iris Plus iyo ikhtiyaar NVIDIA GeForce MX512 GPU oo keli ah. Dheeraad ah, waxaa ku jira illaa 3GB oo ah kaydinta PCIe Gen 4 × 16 SSD, 4GB oo ah LPDDR3X RAM, Thunderbolt 6, iyo Intel-Wi-Fi 12,5-laba-geesood ah. Madax-bannaanida ayaa ah dhinac kale oo ay ka muuqato, taas oo na siin doonta illaa 4 saacadood oo is-maamul-madax-bannaan ah. Waxay sidoo kale leedahay lacag deg deg ah, oo u oggolaanaysa 30 saacadood oo is-maamul ah oo leh XNUMX daqiiqo oo lacag bixin ah.
Laptop-kan waxaa loo soo bandhigay inuu yahay ikhtiyaarka ugu habboon ee lagu shaqeyn karo, laakiin sidoo kale waa firaaqo. Waxay na siisaa midabbo muuqda laakiin macquul ah marwalba. Tani waa suurtagal mahadsanid isticmaalka laba teknoolojiyad muhiim ah oo ku jirta, kuwaas oo ah Acer Color Intelligence iyo Acer ExaColor tiknoolajiyad si loo helo muuqaalo fiiqan oo hagaagsan. Iyaga ayaa mahad leh waxaad heleysaa khibrada ugu fiican ee isticmaale.
Acer wuxuu ku xaqiijiyay bandhigan IFA 2019 in kala duwanaantan la iibin doono bisha Sebtember ee sanadkan. Swift 5 waxaa lagu bilaabi doonaa qiime dhan 999 euro bakhaarada, halka Swift 3 ay xoogaa ka raqiisan tahay, oo qiimahiisu yahay 599 euro. Haddii aad xiisaynayso noocyadan, maalmo yar gudahood waa la iibsan karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Laptops » Acer wuxuu cusbooneysiiyaa noocyadeeda kala duwan ee buugaagta xusuus-qorka 'ultrathin Swift'